Orodyahan asalkiisu Soomaali yahay oo ka mid ah xulka Maraykanka tartanka Olombikada | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Orodyahan asalkiisu Soomaali yahay oo ka mid ah xulka Maraykanka tartanka Olombikada
Orodyahan asalkiisu Soomaali yahay oo ka mid ah xulka Maraykanka tartanka Olombikada
Cabdixakiim Cabdiraxmaan oo ah 44 jir asalkiisu Soomaali yahay ayaa ka mid ah orodyahanada u tartamaya wadanka Maraykanka tartanka Olombikada adduunka oo dhowaan ka furmaya dalka Japan.
Cabdirahman waa oradyahankii ugu da’da weynaa ee Mareykan ah ee abid u tartamaka sameeya koox ka socota dalka Maraykanka ciyaaraha Olombikada.
“Waxaan ahay 44-jir, waxaanan xubin ka ahay kooxda Olimbikada Mareykanka. Waxaan u maleynayaa inaan ka mid noqon doono dadka ugu da’da weyn tuulada Olimbikada, gaar ahaan dhacdooyinka orodka. Kaliya waxaan matalayaa dhamaan ragga da ‘dhexaadka ah ee banaanka jooga kuwaas oo u maleynaya inaysan tartami karin. ”ayuu yiri Cabdixakiim.
Cabdi wuxuu ku dhashay Soomaaliya wuxuu ahaa ilmo yar markii qoyskiisa ay qaxooti ku noqdeen xeryaha qaxootiga. Waxay aakhirkii degeen Arizona oo wuxuu noqday muwaadin Mareykan ah.
Waxaan ahay Mareykan Waxaan ku koray halkan, ”ayuu yiri. “Dalkan wuxuu i siiyay wax kasta oo aan nolosha ka doonayay: waxbarasho lacag la’aan ah, shan jeer oo Olombikada ah. Waan u hanweynahay sida Mareykan, waxaan ugu han weynahay sida Soomaalida. Waan ku faraxsanahay labada dal, ”ayuu yiri.
“Waxaan u tegey tababaraha Kulliyadda Pima, waxaanan u sheegay inaan jeclaan lahaa inaan ordo, wuxuuna i weydiiyay inaan waligey horay u soo ordo. Waxaan ku iri maya. Aniguna waxaan galay kaalinta labaad maalintaas. Taasina waxay ahayd bilowgii shaqadayda orod, si aan daacad u noqdo, ”ayuu sii raaciyay Cabdi oo ka hadlayay taariiqda noloshiisa.
Orodyahan asalkiisu Soomaali yahay oo ka mid ah xulka Maraykanka tartanka Olombikada was last modified: June 23rd, 2021 by Admin
Xaaladaha xanuunsidaha COVID-19 ee dalka laga diiwaangeliyay
Dhagayso:-Shirka golaha iskaashiga dowlad goboleedyada oo furmi doona berito
Video: Magaalada Baydhabo si heer sare ah loogu soo dhaweeyey Madaxweynaha Dowlad Gobolleedka Koonfur Galbeed, Md. Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta Gareen)